I-Idle Casino Umphathi - I-trailer (2020)
Umphathi we-Idle Casino - I-trailer (2020)
Posted on November 24, 2021 November 24, 2021 Umbhali Andrew Amazwana Off ku-Idle Casino Manager - I-trailer (2020)
DLALA MANJE! - http://bit.ly/IdleCasino
Lawula ikhasino yakho futhi ube umphathi ocebe kakhulu!
Ingabe usukulungele ukuqhuba isikhungo esikhulu sokugembula?
Qala ngekhasino encane futhi usebenze kanzima ukwenza ibhizinisi lakho likhule. Engeza imidlalo emisha ukuze udale umuzwa othokozisayo lapho izivakashi zingadlala khona i-poker, i-roulette, i-blackjack noma zizame inhlanhla emshinini wokugembula.
Phatha ibha yakho ye-cocktail bese ushintshanisa idokodo ngokuhlakanipha ukuze uthole imali. Nweba Ikhasino ngezindawo ezintsha futhi uvule imidlalo nemishini emangalisayo kakhulu.
Thuthukisa okukhangayo kwekhasino yakho ngetafula le-poker elisha, ibhola le-roulette eligolide noma imidlalo emisha yemishini ye-arcade. Khulisa indawo yakho yokupaka futhi uqalise imikhankaso yokumaketha ukuze uthole izivakashi eziningi nakakhulu endaweni yakho yokugembula.
Njengoba kancane kancane uba i-tycoon enkulu yekhasino uzodinga ukuqasha abasebenzi abasha noma ukhuphule amaholo abo njengoba ibhizinisi lakho likhula. Isinqumo sokuthi ungayitshala kuphi imali oyisebenze kanzima ingeyakho. Ingabe uzovula imidlalo emisha kuqala? Noma ungathanda ukuthuthukisa lezi osuvele unazo? Kunezindlela ezahlukene zokuzuza inkazimulo kodwa iyiphi ehamba phambili ekusungulweni kwakho?
Uma uthanda imidlalo yokuphatha nengenzi lutho, uzojabulela Umphathi we-Idle Casino Manager. Yize kuwumdlalo okulula ukuwudlala kodwa kuthatha zonke izinqumo zakho zamasu engqondo. Tshala imali yakho ngobuhlakani futhi uguqule ibhizinisi lakho elincane libe yikhasino enkulu efana ne-Las Vegas!
★ Kulula ukudlala umdlalo wawo wonke umdlali
★ Izithombe ezimangalisayo kanye nehluzo ezinhle ze-3D
★ Thatha izinqumo ezibalulekile zebhizinisi
★ Imidlalo eminingi ehlukene etholakalayo.
★ Alukho uxhumano lwe-inthanethi oludingekayo. Dlala ungaxhunyiwe ku-inthanethi noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi.
★ Yenza izinqumo ezibalulekile zokuphatha ukwandisa ukusungulwa kwakho
★ Kumahhala futhi kumnandi
Iba i-casino tycoon enkulu kunazo zonke emhlabeni!
Ulindeni? Dlala manje! 😎
Amabhonasi best casino:
I-50 mahhala ayikho ibhonasi yokufaka imali e-Sverige Automaten Casino
I-130 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Playamo Casino
I-105 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino eBethard Casino
I-95 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-RealDealBet Casino
I-165 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-AllAustralian Casino
I-65 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-24Bettle Casino
I-25 yamahhala ivula ibhonasi yekhasino ku-Argo Casino
I-20 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Winorama Casino
I-40 yamahhala i-casino ku-PrimeScratchCards Casino
I-90 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Playamo Casino
I-40 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-NorskeAutomater Casino
I-115 yamahhala i-spin casino e-Anna Casino
I-85 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit ku-FreeSpins Casino
I-130 ayikho ibhonasi ye-deposit eKar Casino
I-25 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Scratch2cash Casino
I-15 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-Staybet Casino
I-55 mahhala ayikho ibhonasi yediphozi eSilk Casino
I-140 yamahhala i-spin bonus e-LeijonaKasino Casino
I-160 yamahhala i-casino e-Gossip Casino
I-115 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Redbet Casino
I-130 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-888ladies Casino
I-140 yamahhala i-spin casino ku-Norgesspill Casino
I-175 yamahhala e-spin casino lapha LAPHA Casino
I-95 yamahhala i-spin bonus e-Jefe Casino
I-125 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti eCashmio Casino